Unqabe ibheyili owesifazane osolwa ngokubulala ingane eno-10
USIPHUMELELE Mzimba isidumbu sakhe sitholakale sesonakele sicwiyiwe. Isithombe sithunyelwe
LUNGI LANGA | July 10, 2019
UNQABE ukufaka isicelo sebheyili owesifazane (39) waseNazaretha osolwa ngokubulala ingane (10) isidumbu sayo okuthiwa sitholwe sicwiyiwe.
UNksz Zandile Nsele ubevele enkantolo yeMantshi ePinetown ebigcwele ichichima kukhona noNgqongqoshe wezokuThuthukiswa koMphakathi, uNkk Nonhlanhla Khoza.
Usolwa ngokuthunjwa kukaSiphumelele Mzimba isidumbu sakhe esitholakale ngoLwesine olwedlule ehlathini eduze kwendlu obekuhlala kuyo umsolwa. USiphumelele unyamalale ngoJuni 13 eyolukwa nguNksz Nsele.
Ekhulunyelwa ngummeli wakhe (elingatholakalanga igama lakhe), uNksz Nsele uthe ngeke asifake isicelo sebheyili. Isizathu salokhu akazange asibeke.
Umshushisi uNkk Moodley (elingatholakalanga igama lakhe), uthe ngaphambilini uNksz Nsele ubebhekene necala lokuthumba nelokufuna imali, esabisa abazali bakaSiphumelele kodwa emuva kokutholwa kwesidumbu sakhe kwengezwe icala lokubulala.
Kusolwa ukuthi waklinya uSiphumelele ngekhebuli.
Icala lihlehliselwe u-Agasti 20 ukuze kuqhubeke uphenyo. UNkk Moodley uthe kusalindwe nombiko wenye yama-sim card aphenywayo nombiko wokuhlolwa kwesidumbu sikaSiphumelele.
Uthe basakucubungula ukuthi icala lidluliselwe enkantolo enkulu. Ngaphambi kokuthi kuqale icala uyise kaSiphumelele, uMnuz Mlungisi Nkala obebhocobele, uthe akazi ukuthi uzombhekelwa ngubani umsolwa. Ngemuva kokuvela kukamsolwa, uNkala uthe namanje isifiso sakhe asishintshile, usafisa sengathi umsolwa angadedelwa ukuze nabo njengabazali bazibonele ngaye.
Unina kaSiphumelele, uNksz Nosipho Mzimba, uthe umsolwa umthusile kakhulu.
“Engingakusho ngoZandile ukuthi ungethusile kakhulu njengoba nabanye bembonile namhlanje nabebengamazi. UZandile akakhombisi ukuthi angaba umuntu omubi futhi akazisoli ngalokhu ayikhona. Bekufuze engabe ngibone olunye uhlangothi lukaZandile olukhombisa ukuthi (uyabona ukuthi) yonke le nto ayenzile nalabo ahlangene nabo yimbi kanjani. Vele ngiyafisa okufiswa ubaba wakhe ukuthi aphume nje - bamdedele uZandile, nathi sikwazi ukuthi sikwenze lokhu akwenzile enganeni futhi sikwenze sibuze nakulabo abakade bekwenza ukuthi bakuqale esiswini noma bakuqale ekhanda noma bakuqale kuphi ngoba kuyabonakala ukuthi ingane yami uma ngabe injeyaya ngaleya ndlela kukhona lapho beqale khona bayilimaza ngendlela abayilimaze ngayo,” kubalisa uNksz Mzimba.
UNkk Khoza uthe bebevele bephikisana nokuthi uNksz Nsele athole ibheyili ngoba kuyacaca ukuthi angabaleka njengoba abanjwa eseseGauteng. Uthe bazoqhubeka nokweseka umndeni kaSiphumelele nokulandela leli cala kuze kube sekugcineni.
Uthe bazohlinzeka umndeni ngosonhlalakahle abazobasiza njengoba kusafanele batshele nengane yabo enye ngokwenzekile. UNkk Khoza uthe bafisa sengathi umsolwa anganikwa isigwebo esinzima.
“Siyafisa ukuthi uma umthetho udlala indawo yawo ukubheke kakhulu ukuthi isigwebo seminyaka anikwa sona kube yisigwebo esisho utho kumuntu osacabanga ukwenza isehlakalo esifana nalesi. Ngeke isigwebo simbuyise uSiphumelele kodwa isigwebo sisodwa singenza izinhliziyo zabazali nezihlobo zithobeke,” kusho uNkk Khoza.
BUKA: UZodwa Wabantu uchaza ngokumjolisa noBen 10